ပါးကွက်လေးနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုရိသတွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မျက်ဝန်း – Shwe Sar
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက် ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကွက်လေးပါ ပျက်သွားတဲ့ထိ တရှိုက်မက်မက် နမ်းမယ့်သူ ??” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊မ်ာဒယ်မျက်ဝန်းရဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိတ်သတ်တွေ အတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက် တယ်နော်။
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ် ထင် ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိ လာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ်ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတာပါ။
ပုံလေးတှတေိုငျး မှာ မျောဒယျမကျြဝနျး တဈယောကျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိနဲ့ လနျးလှနျးနတော လညျးဖွဈပါတယျ။သူမကတော့ ခပျခခြေ ရိုကျ ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကှကျလေးပါ ပကျြသှားတဲ့ထိ တရှိုကျမကျမကျ နမျးမယျ့သူ ??” caption လေးတဲ့ တငျပေးလာတာပဲဖွဈပါတယျ၊၊မျာဒယျမကျြဝနျးရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို ပရိတျသတျတှေ အတှကျပွနျလညျမြှဝပေေး လိုကျ တယျနျော။
မွငျသူ တိုငျးငေးလောကျ တဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးအလှကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ မျောဒယျလျမကျြဝနျး ကို သိကွမယျ ထငျ ပါတယျနျော။ မျောဒယျလျလောကကိုဝငျရောကျတာ မကွာသေးပငျမဲ့ ပရိသတျအမြားအပွားရဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကို တဖွညျးဖွညျးရရှိ လာတဲ့ မျောဒယျဖွဈပါတယျယောကျြားလေး ပရိသတျတှရေဲ့ ဝနျးရံအားပေးမှုရရှိထားတာပါ။
Previous post ဆွဲ‌ဆောင်မှု ရှိလွန်းတဲ့ အလှတ ရားတွေနဲ့ မြင်ရသူတိုင်းကို ရင်ခုန်သွားေ စတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း
Next post လုံးတင်းနေတဲ့ အမိုက်စားကောက်ကြောင်းအလှနဲ့ ဖွေးဥနေတဲ့ ပေါင်သားအလှကို ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ပိုစ့်ပေးနေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ ပုံရိပ်လေး များ